१९५० सन्धिका चार धारा : यसरी गरिँदैछ परिमार्जन – Etajakhabar
१९५० सन्धिका चार धारा : यसरी गरिँदैछ परिमार्जन
काठमाडौं -नेपाल र भारत प्रबुद्ध समूह (ईजीपी) को छैटौँ बैठकले १९५०को सन्धिका चार धारा परिमार्जन गर्ने निस्कर्ष निकालेको छ। नयाँ दिल्लीस्थित ईजीपी सचिवालयमा बिहीवार र शुक्रवार बसेको बैठकले दुई महिनापछि सातौँ वैठकबाट संशोधित सन्धिको मस्यौदा तयार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बैठकले साझा प्रतिवेदन लेखन शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल पक्षले मस्यौदा लेख्ने जिम्मा पाएको छ।
‘अब १९५०को नेपाल भारत सन्धि यथावत् नरहने कुरामा सहमति भएको छ,’ ईजीपीमा नेपालतर्फका सदस्य डा।राजन भट्टराईले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने, ‘नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाना पनि यही अवस्थामा राख्नु हुँदैन भन्नेमा पनि हामी सहमत भएका छौँ। यसको मोडालिटीका बारेमा हामी चाँडै टुंग्याउँछौँ।’ अर्को बैठक फागुन १२ र १३ गते काठमाडौंमा बस्ने पनि तय भएको भट्टराईले जानकारी दिए। बैठकमा सन्धिको दफाबार छलफल भएको थियो।
सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ संशोधन गर्ने तय भएको छ। तर भारतीयपक्षले अर्को वैठकमा थप राय दिएपछि यो विषय टुंग्याउने सहमति भएको ईजीपी सचिवालयका निर्देशक यादब खनालले जानकारी दिए। बैठकमा नेपालतर्फका संयोजक डा। भेषबहादुर थापा र सदस्यहरू नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा।राजन भट्टराई र सचिवालयका सचिव यादव सहभागी थिए। भारतका तर्फबाट संयोजक भगतसिंह कोस्यारी तथा सदस्यहरू जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी। लामा र बिसी उप्रेती बैठकमा सहभागी थिए। सदस्य भट्टराईका अनुसार बैठकमा सामाजिक आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार तथा पारबहन, सीमा व्यवस्थापन, दशगजाको व्यवस्थापन, विवादित भूमिका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
‘सबै विषय साँघुरिएका छन्, प्रारम्भिक प्रतिवेदन लेखन शुरु हुन्छ’ भट्टराईले भने, ‘कार्यकालभित्रै साझा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। पहिलोपटक एउटै टेबुलमा बसेर सबै विषयमा छलफल भएको छ यसलाई चानचुने रूपमा लिन मिल्दैन।’ दुवै पक्षले साझा प्रतिवेदन लेखेर आ–आफ्ना सरकारलाई बुझाउने कार्यादेश छ। ईजीपीको कार्यकाल आगामी असार २१ गते सकिनेछ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पौष २९, २०७४ समय: ९:०१:११
सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै गोरेले दिए यस्तो बयान जस्ले मोड्यो सुन तस्करी काण्ड : ठूला तस्कर छुट्ने खतरा
‘के लुगा लगाएको यस्तो ? यसलाई चेन्ज गरेर सामान्य कुर्ता सुरुवाल लगाएर आउ’ भन्दै पति सैफ अली खानले असन्तुष्ट भएपछि आयो करिनाको यस्तो जवाफ
संसदमा गोरेको सनसनी, प्रधानमन्त्री नै सरप्राइज !
अब बुद्द एअरलाइन्सले नेपालगन्ज विमानस्थलवाट सिधै भारतको दिल्ली उडान भर्ने
ओली र प्रचण्डलाई भेटेपछि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता, उपेन्द्र यादव सरकारमा जाने !
संसदमा ओलीको जवाफ- ‘पानी जहाज दिउँसै देखेको सपना हो, राति होइन’
तलव ४५ हजार दिने गरि साउदीले गर्यो एक लाख घरेलु कामदार पठाउन नेपाललाई प्रस्ताव ? के गर्ला नेपाल ?
प्रधानमन्त्रीको प्रष्टोक्ति-घर पनि सुनका, गल्ली पनि सुनका बनाउने भनेका छैनौं ! ‘नेपाललाई पहिलो विश्वमा पुर्‍याउछौं भन्न पनि नपाइने हो र ?’
त्रिविमा ट्रान्सक्रिप्टका लागी हप्तौँसम्म लाइनमा बस्न नपर्ने, अब एकै दिनमा काम सकिने
विश्वकप नजिकिदै गर्दा मेस्सी बारे ज्योतीषले गरे अचम्मको भविष्यवाणी : के मेस्सीबारे ज्योतिषहरुले गरेको भविष्यवाणी पुरा होला ?